News - Ọkachamara onye na-eweta laser ngwa usoro ngwọta
Ọkachamara onye na-eweta laser ngwa usoro ngwọta
Taa, ojiji nke iko na-esiwanye n'ọtụtụ ebe, ma n'ihi na nke siri ike na kenkuwa anụ ahụ e ji mara iko, otú ọ bụghị imebi iko mkpụrụ mgbe ịcha na otú ikpochapụ nsọtụ ntụpọ mgbe ịcha, kemgbe akụkụ nke niile ije. nke ndu.
Ultra ngwa ngwa akpụkpọ anụ sekọnd iko laser ọnwụ igwe dị mfe ịchịkwa ndị na-abụghị kọntaktị obere mmetọ technology, nweta elu nkenke ịkpụ n'otu oge ahụ na-ewetara ndị ahịa oké akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gburugburu ebe obibi nchebe mma, n'otu oge ahụ n'okpuru elu na-agba ọnwụ nwere ike hụ na nsọtụ idiocha. , vetikal na ala mmebi uru, na-aghọ ihe ngwọta ọhụrụ na-ewu ewu na ụlọ ọrụ ịkpụ iko.
Ultra-ọsọ akpụkpọ anụ-nke abụọ
Peoseconds ọnwụ enweta kemgwucha elu elu ìhè ike na ala usu ume, mgbe na-eji e ji mara ala thermal ike mgbasa mezue ihe nkwụsịtụ tupu thermal okpomọkụ conduction na gburugburu ihe onwunwe, na nweta elu nkenke nkenke ọnwụ na-enweghị ibibi Ọdịdị nke ihe onwunwe.
Nhazi ihe asynchronous nwere ọgụgụ isi elu na ala akpaghị aka zuru oke
Nhazi okpukpu abụọ nke ikpo okwu na-echekwa oge nke ihe elu na ala.N'ihi na ihe na dịtụ mfe ọnwụ ọnụ ọgụgụ, asynchronous elu na ala Ọdịdị nwere ike entially dịkwuo nhazi ikike.The zuru ezu set nke ngwá na-aghọta na elu mwekota nke iko ihe si etiti ka laser ọnwụ na ịcha n'ime etiti, nke nwere ike ịghọta na usoro dum nke ọrụ na-enweghị mmadụ.
5mm Original iko ọnwụ Plated oghere LCD ihe ịkpụ
Sapphire bee Car Central control glass Smart home ngosi
sample oru oke
XTL-PC5050 akpụkpọ anụ sekọnd cutter
20W, 30W, 40W, 50W, 70W (nhọrọ)
Mpempe akwụkwọ ígwè ịgbado ọkụ kabinet
Njem kasịnụ nke ikpo okwu
Sistemụ mgbasa ozi nrụgide oge niile
Glass pụrụ iche ọnwụ isi
Ogologo ogologo nke laser
Okpomọkụ mmiri jụrụ
1. A na-eji teknụzụ ịkpụ akpụkpọ anụ nke abụọ na-abanye n'ime ihe ndị ahụ ozugbo, a na-eduzi nhazi ultra-short pulse na-enweghị nchịkwa okpomọkụ, nke kwesịrị ekwesị maka igbutu ngwa ngwa nke ihe ọ bụla organic na inorganic.
2. Nabata teknụzụ nkewa nkewa nke otu laser dual-light, nhazi isi laser abụọ, mmetụta okpukpu abụọ.
3. Ejiri CCD visual scanning, akpaka lekwasịrị anya, nkwụghachi ụgwọ mgbazi, mgbazi na-akparaghị ókè, na oke nhazi nke 750mm 550mm.
4. Nkwado dị iche iche nke visual n'ọnọdu atụmatụ, dị ka cross, siri ike okirikiri, oghere okirikiri, L-ụdị nri Angle onu, image ihe ihe, wdg.
5. Nhicha akpaaka, nchọpụta anya na nhazi, ntinye akpaaka na ntinye usoro nwere ike ịhazi ya iji zute nhazi ergonomic, nke mere na nhazi ahụ bụ "ọrụ na obi ike".
6. Research, mmepe na imewe technology ìgwè nke laser microprocessing usoro, ike ịrụ ọrụ na-enweghị consumables.
7. Ịcha na pso njikwa, um-larịị ziri ezi, ụzọ na njikwa mmekọrịta, ịghọta "heterogeneous ọnwụ".
APEX laser mgbe niile na-emeso ọ bụla factory ngwaahịa na elu ụkpụrụ, na n'ụzọ dị irè hụ na ngwaahịa àgwà, nanị izute niile mkpa nke ọrụ, na-edozi isi nsogbu nke users.APEX akpụkpọ anụ sekọnd laser ọnwụ igwe, elu-nkenke gburugburu ebe obibi nchebe, enyemaka. ụlọ ọrụ iji melite mmepụta na arụmọrụ, na-ụzọ nke green na-adigide development.APEX laser, laser nhazi onye na-eweta na ubi nke ọkachamara mmemme, iji nyere ndị enterprise mmepe, anyị na-agbụ-agbụ.